Olee otú iji weghachite WhatsApp Ozi na iPhone 6s / 6 / 5S / 4S / 4 / 3GS
Enwere m ike weghachite ehichapụ WhatsApp ozi? M na accidently ehichapụ a oké mkpa ozi na WhatsApp. Ugbu a, m mkpa n'ezie ya laghachi azụ. Ọ pụtara na otutu m. Biko nyere!
Ebe ọ bụ na free na nnọọ mfe iji, ọrụ dị ka iji WhatsApp na-amalite a chat. Otú ọ dị, ọ bụ dịkwa nnọọ mfe n'ihi na ọrụ ihichapụ WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme accidently. Ọtụtụ ndị na-ajụ ajụjụ "nwere ike m weghachite ehichapụ WhatsApp ozi na iPhone?" na ọtụtụ forums. Ozi ọma bụ na e nwere 3 ụzọ n'ihi na ị na-agbake ehichapụ whatsapp ozi:
Ngwọta 1: Kpọmkwem iṅomi gị iPhone naghachi ehichapụ WhatsApp ozi
Ngwọta 2: Wepụ Whatsapp Ozi si iPhone iTunes ndabere File
Ngwọta 3: Wepụ Whatsapp Ozi si iCloud ndabere File maka iPhone
A Windows PC ma ọ bụ a Mac
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone data mgbake) bụ software iji weghachi WhatsApp ozi na iPhone. Ọ bụ ụwa # 1 data mgbake ngwá ọrụ maka iPhone, iPad na iPod aka iji weghachite ehichapụ ma ọ bụ na-efu data. Site na iji ya, ị nwere ike ọ bụghị naanị weghachite ehichapụ WhatsApp ozi, kamakwa WhatsApp ozi Mgbakwụnye. Ọ na-enyere gị iji weghachite WhatsApp ozi kpọmkwem site iPhone, iPad, na iPod aka, wepụ WhatsApp ozi site na iTunes na iCloud ndabere faịlụ. Download ikpe mbipute gị na kọmputa ịhụ ma ọ nwere ike ịhụ gị chọrọ WhatsApp ozi ma ọ bụ.
Nzọụkwụ 1: Mwepụta usoro ihe omume na jikọọ na gị iPhone ka Mac
Tupu eme ihe ọ bụla ọzọ, igba egbe Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị. Mgbe ahụ jikọọ gị iPhone. Ọ bụrụ na ị na-eji ndị ọhụrụ iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S ma ọ bụ iPhone 4S, usoro ihe omume si window ga-emere dị ka ndị a.
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS, na windo ga-ntakịrị dị iche iche. Ya anya ka n'okpuru. Na ị ga-eme dị ka ihe ọ na-agwa gị ka ị na-eme na window.
Na-ewere iPhone n'aka gị, pịa Malite na window na-amalite.
N'otu oge ahụ, enweta ike na Home buttons na gị iPhone ozugbo maka kpọmkwem 10 sekọnd.
Wee hapụ Ike button mgbe 10 sekọnd, ma ka na-enweta na Home button ọzọ 15 sekọnd, ruo mgbe ị ga-esi n'ime scanning mode ọma.
Nzọụkwụ 2: Malite ịgụ isiokwu gị iPhone na-achọ ehichapụ WhatsApp ozi
N'ihi na iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S na iPhone 4S, dị nnọọ ka usoro si window Ile, ị nwere ike ozugbo pịa Malite iṅomi bọtịnụ iṅomi gị iPhone. Mgbe maka iPhone 4 na iPhone 3GS ọrụ, mkpa ka i soro nkọwa na window-esi n'ime ngwaọrụ scanning mode mbụ, wee iṅomi gị iPhone. Ọ na-ewe gị ole na ole sekọnd rụchaa Doppler usoro.
Nzọụkwụ 3: Preview na-agbake WhatsApp ozi
Na N'ihi window, niile hụrụ data na gị iPhone ga-egosipụta na edemede. E nwere obere button n'elu nke usoro ihe omume, aha dị ka naanị ngosi ehichapụ ihe. Kwado ọ na-egosipụta nanị ehichapụ faịlụ. Pịa WhatsApp Atiya, i nwere ike ịgụ dum ozi gụnyere Mgbakwụnye na Emoji tupu mgbake. Tinye akà rà anya ndị ị chọrọ na pịa Naghachi. I nwere ike ịzọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Nzọụkwụ 1: Họrọ gị iTunes ndabere ma wepụ ya
Iji jiri otú a, ị kwesịrị ijide n'aka na ị synced gị iPhone na iTunes n'ihu gị-efu ndị WhatsApp ozi. Wondershare Dr.Fone Maka iOS-ahapụ gị ịhụchalụ gị iTunes ndabere ọdịnaya na selectively mbupụ data na ya.
Gbanwee na naghachi n'aka iTunes ndabere File mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume, na ị ga-ahụ na windo n'okpuru. E niile iTunes ndabere na kọmputa gị ga-akpaghị aka kwajuru na-egosipụta. Họrọ onye na maka gị iPhone na pịa Malite iṅomi wepụ niile ọdịnaya na ya.
Nzọụkwụ 2: Preview na-agbake ehichapụ WhatsApp ozi
Doppler na-ewe gị ole na ole sekọnd. Mgbe ọ bụ n'elu, ị nwere ike ihuchalu niile data na iTunes ndabere faịlụ. Họrọ WhatsApp, na i nwere ike ịgụ gị niile WhatsApp ozi na nkwado ndabere na mpaghara na zuru ezu. Tinye akà rà anya onye ị chọrọ azụ na pịa Naghachi iji chebe ya na kọmputa gị. I nwekwara ike nne Mmetụta ha niile anya na-enweta ha azụ na otu Pịa.
Nzọụkwụ 1: Nbanye na iCloud ma họrọ ndabere faịlụ ibudata
Iji jiri otú a, biko hụ na ị kwadoo gị iPhone na iCloud n'ihu gị ehichapụ WhatsApp ozi.
Gbanwee na naghachi n'aka iCloud ndabere File mgbe launching usoro ihe omume. Abanye na na gị iCloud akaụntụ. All na nso nso iCloud ndabere faịlụ ga-egosipụta na window. Họrọ onye na e dere gị WhatsApp ozi na pịa Download.
Na mmapụta ahụ, ego Ozi na Message Mgbakwụnye ibudata. Site na-eme nke a, ọ ga-azọpụta unu oge maka nbudata iCloud ndabere faịlụ usoro. Ị maara, dum iCloud ndabere faịlụ bụ nnọọ nnukwu.
Pịa iṅomi ike iṅomi ndị faịlụ ebudatara iji weghachite ehichapụ WhatsApp ozi. Mgbe usoro a na okokụre, pịa WhatsApp na ekpe sidebar ka ịhụchalụ gị chat akụkọ ihe mere eme. Ego onye ị mkpa na pịa Naghachi naghachi WhatsApp ozi gị na kọmputa
> Resource> iPhone> Olee otú iji weghachite WhatsApp Ozi na iPhone 6 / 5S / 4S / 4 / 3GS